သစ္စာနီ| February 4, 2013 | Hits:14,643
စောမူတူးစေးဖိုး ဘာမှားလို့လဲရာဇဝတ်မှုတွေ ကင်းပပြီး လူမှုဘဝ လုံခြုံမှုရစေဖို့ ဘယ်လို တာဝန်ယူမှာလဲဆန္ဒမရှိသေးလုို့ စုိုးရိမ်စရာ မရှိတာပါကန့်သတ် ချုပ်ချယ်မှုတွေကြောင့် အဝေဖန်ခံနေရတဲ့ ပညာရေး ဥပဒေမူကြမ်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများရှိ ပြင်ညီတာဝန်ခံမူ (၁)
Yin Moe Hlaing February 4, 2013 - 6:46 pm Whatagood writing! Thanksalot to the author for this article.
Reply AunG February 9, 2013 - 3:28 am I support MyintHlai speech ,because he is one of royal bama and his words are truly base on our god Buddha teaching. So, he may beaGood Buddhist…and we should must to pay Debt before our die…,this is Buddha teaching…!
Reply pps၁၂၃၄၅ February 4, 2013 - 7:44 pm ဒီလို တည့်တိုးပြောတာ လိမ်ညာပြီး ဟန်ဆောင်နေတာ ထက် အများကြီးကောင်းပါတယ်ဗျာ။
Reply ဆဲချင်သူ February 5, 2013 - 9:13 pm I agree with you. Better than most singers and movie stars.
Reply minko February 4, 2013 - 8:14 pm မထူးပါဘူး-သာဂိ ပြောသတဲ့ လေသံနဲ့ ပြောရလျှင် ရွာဂံတော် သမ်းမတဂျီလဲ- ဒီပုတ်ထဲက ပဲပါဘဲ- စူက သမ်းမတ ဆိုတော့ ပါးစပ်ကတော့ မဟဘူးပေါ့- စိတ်ထဲမှာတော့ ဒီ အရူးအပေါတွေပြေတာ အတော် သဘောခွေ့ နေလောက်တယ်။
Reply ရာဇာ February 4, 2013 - 8:46 pm မြင့် နေတုံး လှိုင် တတ်တဲ့ ဦးမြင့်လှိုင် ရေ..တနေ့မှာ ရင့် ပြီးတော့ ယှိုင် သွားတတ်တယ် ဆိုတာလဲ မမေ့နဲ့….ပင့် ပြီးတော့ ချိုင် စားတတ်တဲ့ လူတွေလဲ ရှိတယ် ဆိုတာ သတိရ….အဓိက ကတော့ တယုတယ နဲ့ ပြည်သူတွေ ကို ချစ်တဲ့ စိတ်မွေး…ဒါမှလဲ ဖြစ်မဲ့ နမိတ်ဆိုးတွေ ကင်းလွတ် သွားလိမ့်မယ်….နော့…
Reply Wut Yee February 4, 2013 - 10:05 pm “တနပ်စား မြင့်လှိုင်” က ထမင်းတနပ်စားဖို့ ပြည်သူကို အကြံပေးလိုက်
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ February 5, 2013 - 3:43 am ဆရာရေ … အိုဘားမားရဲ့ နေဗီဆီးလ်တွေကို သူတို့ သွားရမယ့် နေရာ မြေပုံ ထုတ်ပေးရင် လိုင်ဇာသွားတဲ့ လမ်းမပေးပဲ နေပြည်တော် သွားတဲ့ လမ်းမြေပုံသာ ထုတ်ပေးလိုက်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် အဲသည် ၀န်ကြီး လှဆွေ အိမ်လိပ်စာလေးပါ ပေးလိုက်ပေါ့။ တခုတော့ မမေ့ပါနဲ့။ နေဗီဆီးလ်တွေ လာမယ့် နေ့ကို ကြိုပြောပါလို့။ ကြံ့ဖွတ်နဲ့ စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်က လွဲပြီး တခြား လွှတ်တော် အမတ်တွေကို အဲသည်နေ့ ခွင့်ယူဘို့၊ ရုံးမတက်ဘို့ ကြိုသတိပေးချင်လို့။
Reply win Swe March 2, 2013 - 11:58 am ဒီလောက်တောင်မေတ္တာထားတယ်လား၊ဘောင်းဘီချွတ်တွေက လူမိုက်စကားဘဲပြောတတ်တာ နေဝင်းအစ လှဆွေအလယ်မြင့်လှိုင်အဆုံးပေါ့၊ သမိုင်းမကောင်းမဲ့လူတွေပေါ့။
Reply yemyin February 5, 2013 - 2:01 pm This is the sign of Myanmar government and Hluttaw. President and Hluttaw chair men are (Ex-army). Most of the minister are come from army and ex-army.One party (Kyant Phut) influence in Hluttaw.Myanmar is now really control by army.
Reply tt February 5, 2013 - 2:37 pm မြင့်လှိုင်နဲ့ ကျော်မြင့်လှိုင်ပေါင်းပြီး ဆည်မြောင်းကိုလဲ ဖျက်ဆီးနေတယ်… သမတကြီးက လူငယ်ပညာတတ်တွေကို ရာထူးတိုးပေးဖို့ ပြောတယ်… ကျော်မြင့်လှိုင်က သူရာထူးတိုးပေးချင်တဲ့သူတွေ ကုန်တော့ ဌာနမှာ (၅) နေရာနေဖူးမှ ရာထူးတိုးပေးမယ်တဲ့… သူကိုယ်တိုင်ကျ (၅) နေရာမနေဖူးပဲ ညွှန်ချုပ်လုပ်နေတယ်…. သူတို့နှစ်ယောက်မြန်မြန်ပြုတ်မှ ကောင်းမှာ….
Reply ဒေါက်တာဂုတ်ကြား February 5, 2013 - 2:41 pm သူတို့လည်းတတ်သလောက်၊ သိသလောက်၊ ပြောရဆိုရတာပါ။ သဘောထားကြီးကြီးထားပြီး
Reply Win Myit February 5, 2013 - 5:37 pm ဒေါက်တာဂုတ်ကြားသုံးသပ်ပြမှ ၊သမ္မတကြီးက ဝန်ကြီးတို့ အကြံပေးတို့ဆိုတာတွေကို ခန့်ညံ့ညံ့လေးတွေခန့်
Reply မြန်မာပြည်သား February 5, 2013 - 8:52 pm ဒီလို ဦးနှောက်ကြောင့် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာထူးရလာတာ။
Reply mimiye February 6, 2013 - 4:28 pm အထက်ပါဆောင်းပါးမျိုးများများရေးပေးကြပါ။မြင်.လိူင်နဲ.ကိုကိုလှိုင်ကအမွာလေ။မြင်.လိူင်တခါလည်းလွတ်တော်အမတ်တွေကိုတောင်းပန်ရပြီးပြီ။ရာတူးပြူတ်မှာစိုးလို.(အရှက်ကဘေးဖယ်)။
Reply ဌေးဝင်း February 7, 2013 - 9:20 pm အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါတပုဒ်ပါ…အခုလိုသမတအကြံပေးတွေ…၀န်ကြီးတွေ…ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့မှတ်သားလောက်တဲ့စကားတွေကို….စုစုစည်းစည်းတင်ပြပေးတဲ့အတွက်….ဧ၇ာဝတီကိုကျေဇူးတင်ပါတယ်။ အားလုံးကလဲကြံ့ဖွတ်တွေချည်ဘဲနော်။
Reply wana February 8, 2013 - 11:19 am ဒီလိုဦးနှေက်မရှိတဲ့လူတွေပိုင်ဆိုင်နေတာ တိုင်းပြည်အတွက်အရမ်းနစ်နာတယ်။အဖက်ဖက်ကဆုံးရှုံးမှုတွေပဲ
Reply Lulay February 12, 2013 - 11:49 am Whether they wear longyi or pants, they are the same men. Also whether they wear shoes or sandals, they are the same men. Their robes and uniforms do not change their hearts. These people are still the same dictators. They are no Buddha.
Reply သစ္စာဖြူ February 17, 2013 - 11:09 am ကိုသစ္စာနီရေ
အကြမ်းဖက် အန္တရာယ်ကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲ